Vista Ga-buut Up: Olee idozi ya
> Resource> Utility> Vista Ga-buut Up: Olee idozi ya
Ebe a bụ ụzọ ole na ole ị nwere ike ịgwa Windows Vista na-agaghị buut:
> Mgbe kọmputa agaghị buut elu, ọ na-ada ka ọ na-booting n'ihi na CPU ofufe na-agba ọsọ na ọkụ na-na. Ọ nwekwara ike na-agụ CD ROM, ma unu apụghị buut ya si a
CD.> Ụfọdụ, mgbe i nwere kọmputa nwa ihuenyo on mmalite na ike mgba ọkụ ìhè ga-green na mgbe ahụ atụgharịa oroma ma ọ bụ amba. Ihe niile na-agba
ọsọ.> Ihe niile yiri ka a ga-agba ọsọ ma unu apụghị ịhụ ihe ọ bụla na ihuenyo, ọbụna a na-egbu maramara cursor. Gị nwa ihuenyo na Windows ka mere tupu Windows logo ihuenyo.
Dị ka ihe ndị mere na ime ka gị Windows Vista buut nsogbu, e nwere ike inwe ọtụtụ narị. -Adịkarị, ọ bụ ihe dị mfe aka ya mgbe e nwere ihe njehie ozi chetaara. Ị nwere ike Ibu Ibu na nchebe mode na-agbalị iji rụkwaa ya. Gịnị ma ọ bụrụ na e nweghị-echeta ozi ma ọ bụ Nchekwa mode na-a nwụrụ anwụ ọgwụgwụ? N'oge a, a obere kọmputa ịnọgide na-enwe nkà bụ nnọọ uru.
Otú ndozi Windows Vista buut nke
Iji idozi nke a "Windows Vista agaghị buut elu" nsogbu, ị chọrọ iji nweta a pụrụ ịdabere na Vista buut disk. Ọ bụrụ na ị na-adịghị otu onye, ​​Wondershare LiveBoot buut CD nwere ike ịbụ oké nhọrọ. Nke a dị ike na kọmputa bootable ngwá ọrụ-enyere gị aka buut elu gị na kọmputa n'okpuru ọnọdụ ọ bụla.
Bilie gị Liveboot CD / USB ebe a, na-agụ na-amụta otú e si edozi gị "Windows 7 agaghị buut elu" nsogbu na 2 nzọụkwụ.
Step1. Buut gị na kọmputa site LiveBoot CD / USB
Fanye LiveBoot CD ma ọ bụ LiveBoot USB mbanye n'ime kọmputa nke nwere ike na-amalite elu, mgbe Malitegharịa ekwentị gị na kọmputa. Tupu Windows loading, pịa F12 gaa buut Ngwaọrụ NchNhr, na-ahọrọ "onboard ma ọ bụ USB CD-ROM Drive". Mgbe ahụ ị ga-esi na ihuenyo dị ka ndị na. Họrọ ka buut si LiveBoot.
Nke a LiveBoot disk-enye gị a kpere ọcha ma dị nchebe usoro. Ke ndidụk ya, ị nwere ike imezi dị iche iche nsogbu na gị onwe gị Vista.
Step2. Idozi "Vista gaghị amalite elu"
Na-abanye usoro, ẹkedori LiveBoot usoro. Gaa na "Windows Iweghachite" ma na-achọta ngwọta si "buut Crash Ngwọta" ke mgbake center. All kọmputa buut okuku mgbaàmà na-kọwara n'ụzọ doro anya ebe a, na e nwere ihe ngwọta na-ọ bụla mgbaàmà. I nwere ike ịgbalị ọ bụla n'ime ha ga-ahụ otu ihe kasị mma maka kọmputa gị.
Mgbe nsogbu ofu, wepụ nke LiveBoot CD / USB mbanye, na Malitegharịa ekwentị gị na kọmputa ka nkịtị. Mgbe ahụ ị pụrụ buut gị Vista ọma.
Ịmatakwu banyere Wondershare Liveboot 2012
Otú e si edozi Blue ihuenyo (BSOD) na Windows 7
Olee otú Tọgharia Windows Vista Paswọdu enweghị Loading na
Olee otú buut Vista na a Windows Vista buut Disk
"Black ihuenyo" na mmalite (Windows 7, XP & Vista)
Olee otú akwagakwa OS ka SSD (Solide State Drive)
Chefuru Gmail Password: Get Ọ Back Ugbu a
Ike izipu ma ọ bụ Anata Text Ozi - Idozi Nsogbu
A Full Guide downgrade si Yosemite ka Mavericks
Diski ike Mirroring Software: ndabere gị PC
Olee otú ịrụzi a BOOTMGR na-efu Error
Best Way mmepụta oyiri OS ibu Draịvụ
Olee otú ọsọ Up Computer Back ya Original Ijeụkwụ
Olee otú Idozi Shlwapi.dll Njehie na gị PC